KSplash ama 'Simple' BootSplash oo loogu talagalay ArchLinux iyo Chakra Linux | Laga soo bilaabo Linux
KSplash ama 'Simple' BootSplash oo loogu talagalay ArchLinux iyo Chakra Linux
El KSplash (sidoo kale loo yaqaan BootSplash) waa animation-kaas, ama saamaynta ay leedahay KDE Waxay ina tusaysaa markaan galno, taasi waa, waxa badanaa aan aragno:
Hagaag, waanu dhigi doonaa tan kale:
Waxay u taagan tahay si aad u wanaagsan Archlinux ... fudud, fudud, qurux badan 😀
Si loo rakibo waa sahlan tahay, waa kuwan tallaabooyinka:
1. Download faylka: Soo Degso Fudud FududLinux KSplash
2. Fur Nidaamka doorbidida oo soo gal Muuqaalka goobta shaqada.
3. Markii aan halkaa tagno, waxaan tagnaa baarka bidix illaa halka ku qoran «Shaashadda Annunciator«.
4. Waxaan riixnaa badhanka Ku rakib faylka mawduuca, daaqad ayaa furi doonta (sida Loo Isticmaalayo) kaas oo aan ku raadin doono faylka aan soo dejinay.
5. Waxaan ku xulannaa liiska oo gujineynaa aplicar.
Waxaan kuu daynayaa sawirro qaar si aad si fiican u fahamto:
Iyo voila, waa la rakibi doonaa oo la qaabeyn doonaa 😀
Hadaad isticmaasho Linux Chakra, halkan waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad isticmaasho mid sidan oo kale ah:
Soo Degso Fudud Chakra KSplash
Iyo ... middaas Chakra runta ayaa fiican
Mar labaad haha, wax ku darsasho kale oo heer sare ah mcder ????
Salaan iyo raaxeysi, tan iyo shalay waxaan isticmaalaa halka 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » KSplash ama 'Simple' BootSplash oo loogu talagalay ArchLinux iyo Chakra Linux
Aad ufudud oo qurux badan, aad ayaan uga helay iyaga hadda waxaan soo degsadaa midka loo yaqaan 'chakra one'.
Haa ... ¬_¬ ... runtu waxay tahay in midka Chakra ee leh saameyntaas oo muujinaya muuqaalka kore ee astaanta uu runtii qabow yahay ... ggggrrrr iyo Arch's ma laha wax la mid ah qabowgaas ¬_¬
Waxaa laga yaabaa inay fiicnaan laheyd in Arch uu u muuqdo 0% daahfurnaan, ka dibna inta la rarayo si loo helo 30%, 40%, 50% daahfurnaan, ka dibna hoos loo dhigo daahfurnaanta hal mar ka badan 50% ilaa 40%, 30%, 0%. Sidee ayey u fiicnaan laheyd taasi? Logo Astaanta Arch oo libiqeysa haha ​​😀
mcderSidee buu u adag yahay in la sameeyo saaxiibkaa?
Miyay adkaan doontaa in si isku mid ah loogu faafiyo qashin kale?
Ku jawaab southpaw
Maya maya 😀
Wax ka beddel oo ku dheji astaanta Kubuntu, Pardus ama kuwa kale ee 'distros' is Codsi kasta? 😀
Waxaan isticmaalaa chakra fudud, waan jeclahay, ugu yar buluug chakra desktop iyo kdm helium one, kala guurka kdm ilaa miisaska miisaska uu weyn yahay. Wax walba waa shaqo → mcder
Tani waa waxa kaliya ee ka maqnaanaya qolalka Caledonia, isweydaarsiga asalka ah waa mid aad u yar, marka baarka iyo astaanta saxda ah waa 100!
KZKG ^ Gaara, miyaad ka ogtahay bogag qaar inaad kala soo baxdo darbiyada qaraar dhan 1024 × 1366, oo leh darbiyo wanaagsan oo lagu raaxeysto chakra? Waad salaamantihiin dhamaan bulshada ka socota linux.net
Ugu jawaab hugotic
Naaneysyada: Gawaarida gawaarida
Mint Ront Font